I-Evinrude 3 Project Lightwin Tune Up Up Project | Ukulungiswa Kwezimoto Zase-Outboard
Uma unamazwana noma imibuzo mayelana ne-Evinrude 3 HP Lightwin, noma iphrojekthi efana ne-Tune UP, sicela ushiye ngezansi.
Kumele Ngena ngemvume uma ufisa ukushiya amazwana.
Kuthunyelwe ngu- positron NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 23: 23
i-drivehaft ngeke ihlanganyele
Ngishintshe umgodi ku-3 hp 1952-54 (JW-1) uJohnson. Njengoba ngilihlukanisile, i-unit ephansi yawa phansi. Manje, i-driveshaft ayihlanganisi i-propeller. Kuqhutshwa yonke indlela. Ingabe kukhona ukhiye noma omunye umlingo okwenza i-propeller iphenduke?
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ngo-Wed, 01 / 23 / 2019 - 10: 29
Ekuphenduleni i-drivehaft ngeke ihlanganyele by positron
ke ngithatha i-unit engezansi futhi ngiyibuyisela ndawonye i-shaft kubonakala sengathi iyindlela yonke kodwa angizange ngithole ukuthi uma ubamba i-unit engezansi ngakho-ke umkhiqizo uphelela esigodini futhi ubheke emgodini uzokwenza vula uvule umuthi kodwa uma ubamba ngakho-ke isakhiwo sibhekene nodonga ikhi encane efana neyodwa into eyovela ngaphakathi
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 NgoThu, 06 / 06 / 2019 - 07: 26
lapho i wathatha iyunithi yami aphansi ...
lapho ngithatha uphiko lwami olungezansi kushaft yedrayivu ngeke ihlale kuyunithi kimi ngabona ukuthi kukhona uhlobo "lokhiye" ngagcina ngokubamba iyunithi engezansi emaceleni ibheke phezulu ophahleni
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 06 / 29 / 2017 - 23: 42
Nawu umdwebo. https: /…
Nasi umdwebo. http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
- Buyekeza- Ngilungise isixhumanisi.
Kuthunyelwe ngu- positron ku Fri, 06 / 30 / 2017 - 22: 54
Ekuphenduleni Nawu umdwebo. https: /… by ttravis
Isixhumanisi esithombeni siphelile. Awu ...
Isixhumanisi esithombeni siphelile. Awuqinisekile ukuthi "i-youtu.be" ayiyena yini i-youtube!
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Sat, 07 / 01 / 2017 - 07: 04
Ekuphenduleni Isixhumanisi esithombeni siphelile. Awu ... by positron
Kubi kwami ​​.... Zama lokhu: http:…
Kubi kwami ​​.... Zama lokhu: http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
Kuthunyelwe ngu- i-jakeboat Ku-Mon, 07 / 10 / 2017 - 23: 17
Nasi isimo enginaso, futhi ngiyaxolisa kusengaphambili uma ngabe lena akuyona indawo noma ifomethi efanelekile yemibuzo yami kepha ngintsha ezinkundleni ezinjengalezi. Nginendodana ethanda ukudoba futhi besilokhu sidoba ogwini eminyakeni embalwa edlule kepha isikhula ngokwanele ukuthi ifuna ukuphuma emachibini. Izindaba ezimnandi ukuthi sihlala eMinnesota ngakho kunamachibi amaningi, izindaba ezimbi ukuthi angikaze ngibe seduze kwezikebhe. Sithole i-14'boat / trailer evela kothile kanye ne-evinrude 3hp lightwin motor. Ukuqala kahle bathi kuhamba kahle. Sayikhipha izikhathi ezihlanganisiwe futhi yahamba kahle. Ngokusho ukuthi i-throttle ephelele ibisahamba kancane, kepha ngicabanga ukuthi yi-3hp, bekufanele ngigcine i-throttle 3/4 igcwale ukuze iqhubeke. Yabe isiqala ukufa, ngaso leso sikhathi. Ngibonile amahlandla ambalwa ukuthi ivuseleleke cishe imizuzwana emi-3, mhlawumbe ngokuthi kufanele ngabe ikuphi. Kepha kucishe kwasishiya sishiyeke echibini futhi ngithanda ukuthi sikulungise ndawonye kodwa ngisha kuma-motor wokujikeleza ama-2. Kuze kube manje ngishintshe ama-plugs ngakhipha igesi ngokuphelele ukuze ngiqale kabusha. Yibeke ithangi futhi yagijima ngokufana nangaphambilini. Noma yikuphi ukuholwa / ukuqondiswa kungabongwa. Kusukela ekufundeni leli sayithi kuzwakala sengathi ikhithi ye-carb yisiqalo esihle. Noma iziphi iziphakamiso?
I-Motor yi-Evinrude 3hp i-lightwin model ye-3602e.
Ngingathanda ukusiza ukufundisa umfana wami mayelana nama-motor boke futhi lokhu kubonakala sengathi iwuhlelo oluthile lokuqala.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 07 / 10 / 2017 - 23: 35
Ekuphenduleni Dinga usizo by i-jakeboat
Bheka kahle ...
Bheka kahle ukuthungela. Konke futhi ngiqonde ukuthi WONKE ama-3 HP motors ukuthi amadala adinga amakhoyili amasha, futhi angahle ashintshe amaphuzu ne-condencer ngenkathi ukuwo. Awukwazi ukusho ukuthi lezo zingxenye azizimbi yini ngokuzibuka.
Hlola i-3 yami kanye namakhasi we-5.5 hp wokukhanyisa.
Ngingenza ukukhanya okugcwele njengoba ngenzile ngaphambi kokuba ngidabule indodana yami nayo.
Kuthunyelwe ngu- i-jakeboat Ku-Mon, 07 / 10 / 2017 - 23: 42
Ekuphenduleni Bheka kahle ... by ttravis
Ngithola kuphi ukukhipha kwakho ...
Ngiyitholaphi i-tune yakho?
Kuthunyelwe ngu- I-Ram Jet Ku-Sun, 02 / 11 / 2018 - 23: 20
Ngisanda kuthenga iJohnson 3 HP futhi ngiyayilungisa. Nginolwazi olulinganiselwe ngama-outboards nezinjini zomjikelezo ezi-2. Okuthunyelwe kwakho kuthunyelwe ngoJulayi odlule kepha ngivele ngajoyina. Uma ngingaluthola usizo ngazise. IMyohnson 3 yami ihlukene manje ilinde ezinye izinto ezizongena esikhundleni sayo. Empeleni iyinjini emnandi futhi elula ukusebenza kuyo - yayenzelwe ukuba ibe yiyo. Uma kwenzeka ungazi ukuthi uJohnson no-Evinrude bayinjini efanayo eyisisekelo.
Kuthunyelwe ngu- i-jakeboat Ngo-Tue, 08 / 01 / 2017 - 20: 41
Ngakho ngathola zonke izingxenye ...
Ngakho-ke ngithole zonke izingxenye zohlelo lokushisa kusuka ku-amazon ngenxa yalesi siza. Kwakulula kakhulu. Ngilandele umsindo wokushisa kuze kube seqophelweni lesikhathi ngisebenzisa imitha ejwayelekile ye-ohm futhi yilapho ngilahleka khona. Angazi lutho ngogesi ngakho-ke amatemu afana nokuvuleka okuvaliwe okungenamkhawulo njll. Kuyangidida.
Iyiphi ithuluzi engidinga ukuyihlola? Ngikufakaphi kokubili ukuholela? Umhloli umfana esitolo sezingxenye zomoto wangithengisa kuphela isiqeshana esisodwa ngakho ngicabanga ukuthi imitha engalungile? Ngitshela kanjani ukuthi iyiphi inombolo eyodwa noma emibili?
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Tue, 08 / 01 / 2017 - 23: 23
Ekuphenduleni Ngakho ngathola zonke izingxenye ... by i-jakeboat
Isithombe ngesifunda esilula ...
Faka isithombe sesekethe elula lapho unebhethri nebhalbhu ekhanyayo. Uma unocingo olusuka ebhethri luye kubhalbhu, bese kusuka ku-bulb ubuyela ebhethri, unesekethe evaliwe. Ugesi ugeleza ngendlela engophuki uma usuphuma uhlangothi olulodwa lwebhethri luye kolunye uhlangothi. Ukube ubunganqamula enye yezintambo, ubuzovula isekethe, njengoba nje inkinobho evamile yokuvula ivula futhi ivale isekhethi ibhalbhu elikhanyayo. Ama-valve amanzi asebenza ngokufana .... uyawavula noma uwavale.
Lokho okuvivinywayo kufanele uqiniseke ukuthi amaphuzu okuphumula asondele ngesikhathi esinqunyiwe sokuthi isikhathi sokumaka ku-flywheel sihambelana kahle ne-timing mark kwisisekelo se-stator.
Uma uthatha imitha yakho ye-ohm bese uthinta ama-probes amabili ndawonye, ​​imitha yakho ye-ohm izokhombisa u-0 noma isifunda esivaliwe. Uma ama-probe engathintani, ukufundwa kuzoba okungapheli noma isifunda esivulekile. Amanye amamitha we-ohm anendawo lapho imitha izobhuza khona bese kuvalwa isifunda. Lokhu kubizwa ngokuthi ukuhlolwa kokuqhubeka.
Imitha ye-ohm ingasetshenziselwa ukuhlola ukuthi isifunda sivulekile noma sivaliwe. Ake sithi sifuna ukuhlola isibani esivamile sombane wasekhaya. Uma ubeka ukuhola okukodwa kwemitha ye-ohm phansi kwe-lightbulb, kanti okunye kusixhumi esiphakathi nendawo, imitha ye-ohm izohlola ukuthi ngabe ugesi ungahamba yini ngentambo ye-lightbulb. Uma intambo yephukile, isekethe livuliwe njengoba kukhonjisiwe ukumelana okungapheli (ugesi awuhambi emoyeni ngamandla aphansi) ngakho-ke isifunda sivuliwe futhi isibani sishisiwe. Uma uthola ukufundwa kumitha ye-ohm eyi-0 noma ecishe ibe ngu-0, khona-ke ugesi ugeleza phakathi kwe-filament futhi i-lightbulb kufanele ibe yinhle. I-ohmmeter ayithumeli ugesi owanele ukukhanyisa isibani, kepha izobheka ukuqhubeka, noma isekethe livulekile noma livaliwe.
Nansi i-youtube ividiyo kule ndaba.
Hlola amehlo ami I-5.5 HP I-ignition Page lapho ngenza khona umsebenzi ongcono ochaza ukuthi ungasihlola kanjani isikhathi. Kuyimoto ehlukile, kepha uhlelo lokushisa luyefana ncamashi. Imvamisa ngikhuthaza abantu ukuthi bafunde zombili i-3.5 ne-5.5 HP.
Ukuhlolwa kwakho kuholela ku-ohm yakho ngeke kuhambisane ngaphansi kwe-flywheel ukuhlola isikhathi sokuthi uzodinga ukuxhuma ucingo olulodwa olufushane kuphuzu lakho lokuphumula. Izintambo zokuhlola ngeziqeshana zama-alligator kushibhile futhi kuyasebenziseka. Ungabathola esitolo sendawo sehadiwe, noma Amazon. Isiqeshana esisodwa socingo lokuhlola ku-screw terminal endaweni yokuqhekeka, lapho uvame ukunamathisela khona izintambo zekhoyili nezokuhambisa njengoba kukhonjisiwe ku-5.5. Yondla omunye umkhawulo wocingo lokuhlola phansi ngembobo esisekelweni se-stator.
Manje usungahlola ukuthi amaphuzu akho avulekile noma avaliwe yini ngokuxhuma ukuhola okukodwa kwemitha yakho ye-ohm kuya ekuholeni kokuhlola, bese kuthi omunye ungene phansi. Ngomhlabathi, ngisho noma iyiphi insimbi engenalutho noma isikulufa esikhulayo emotweni. Imoto uqobo ingomunye umholi wokuhlola.
Manje usulungele ukuvula i-flywheel bese ubona ukuthi isifunda sivale uma izimpawu zesikhathi zihlanganiswa ngendlela efanele njengoba kuboniswe ngenqubo.
Uzodinga ukuphinda le nqubo ukulungisa isikhathi samanye amaphoyinti okuphuza enye isilinda.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasiza. UTom
Kuthunyelwe ngu- i-jakeboat NgoThu, 08 / 03 / 2017 - 22: 21
Ekuphenduleni Isithombe ngesifunda esilula ... by ttravis
Wow, lokho kwakukuhle kakhulu. ...
Wow, lokho bekuwusizo olukhulu. Ngilandele leyo miyalo futhi ngakwazi ukuqedela ukuhlelela uhlelo lokucekela phansi. Ngayifaka ebhakedeni ngayigijimisa. Begijima kangcono kakhulu kepha noma kunjalo ayizukuvuka phezulu kakhulu, futhi nentuthu eluhlaza okwesibhakabhaka noma ngabe ngiyilungise kanjani i-carb. Kuhamba kangcono njengoba ngiphendulela inkinobho yokuhlenga ngakwesokudla kodwa iyaphuma ngaphambi kokuthi kusebenze kahle.
Ngangicabanga ukuthi ngingase ngiphume ikotini ye-carb ngoba kusukela kulokho engangikubona kusuka ku-gasket ukuphuma ngaphandle, kubonakala okusha. Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi ngizokwenza kit carb kusasa.
Siyabonga ngakho konke usizo oluye lwaphazamisa, kodwa kumnandi / ukufundisa.
Kuthunyelwe ngu- i-jakeboat Ku-Sun, 08 / 06 / 2017 - 18: 16
Ekuphenduleni Wow, lokho kwakukuhle kakhulu. ... by i-jakeboat
Ngisanda kuchitha izinsuku ezimbili zokugcina ...
Ngichithe izinsuku ezimbili zokugcina echibini. Leli sayithi liyamangalisa futhi lingivumele ukuba ngilungise i-afun motor motor up. Ibeka ama-putters azungeze kancane kepha azinzile manje. Ngiyabonga izigidi ngalo lonke usizo. Umfana wami ubeyishayela izungeza namuhla, emamatheka kakhulu.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 08 / 07 / 2017 - 01: 18
Ekuphenduleni Ngisanda kuchitha izinsuku ezimbili zokugcina ... by i-jakeboat
Nginesiqiniseko sokuthi unokwazisa okukhulu manje ngoba uyazi kahle leyo moto. Ngithemba ukuthi ubandakanye nomfana wakho ukuze azuze ulwazi oluzohlala impilo yonke. Kuyamangaza ukuthi bangaki abantu abalungisa lawo ma-motor 3.5 HP. Bengibheka izibalo ezithile zaleli sayithi. Namuhla abantu abangama-234 bavakashele isiza futhi bachitha isikhathi befunda ngephrojekthi ye-3.5. Lezi zivakashi zivela emhlabeni wonke nangezilimi eziningi ezahlukahlukene. Lokhu akubandakanyi amanye ama-motors. I-3.5 iphrojekthi yethu ethandwa kakhulu. Jabulela imoto yakho futhi ingahlala okungenani eminye iminyaka engama-50. Uma uthola ithuba, thumela ezinye izithombe lapha. Izithombe namazwana afana nelakho angumvuzo wami omkhulu. UTom
Kuthunyelwe ngu- I-Ram Jet Ku-Sun, 02 / 11 / 2018 - 23: 24
Awudingi isikhathi sakho…
Awunayo isikhathi injini yakho. Kwenzelwe wena lapho kwenziwa. Vele uqiniseke ukuthi amaphuzu cam eccentric afakwe kahle ku-crankshaft futhi ipuleti lamaphoyinti lifakwe kahle. Uma unazo zonke izingxenye ezintsha, amakhoyili, ama-condensers namaphoyinti mane uwafake futhi uvale amaphuzu bese ushintsha i-flywheel.
Kuthunyelwe ngu- i-jakeboat Ngo-Sat, 08 / 26 / 2017 - 07: 33
Ngimise i-3hp Evinrude kuleli hlobo, okusho ukuthi, izingxenye ezintsha zokushisa, ikhithi ye-carb njll ... Ngokuyinhloko konke okuvela kule webhusayithi. Sikuthathe sakudoba cishe izikhathi eziyishumi nambili, futhi kwahamba kahle impela. Isazoqhubeka nokukhwehlela, njengokufishane kukaphethiloli, maphakathi nebanga, kodwa isivinini esiphansi nokuvuleka okubanzi bekulokhu kusebenza kahle. Manje ngihlangabezane nenkinga entsha. Kade sayiqhubekisela phambili kusukela ekwethulweni kwesikebhe futhi ngemuva kwemizuzu engaba ngu-15 isebenza izoqala ukukhuphuka / ikhukhumeze kabi impela. Uma ngiyivuma phansi izosibuyisela ekwethulweni, kepha kusheshe = kusebenze ngokubi. Ngiqale ukucabangisisa ngokulungiswa, le moto inoyedwa kuphela, angikwazi ukuthola leso simo ukuthi sihambe. Okuqaphelekayo ukuthi ngisanda kuthola ngenaliti yokulungiswa ihleli ngokuphelele, noma yonke indlela, imoto namanje ayizukufa. Ngimusha ezinjinini kodwa bekungafanele yini lokho kusikwe kwegesi bese kubulala imoto? Ama-plugs amasha, igesi, amakhoyili okushisa, izingxenye ze-carb, i-fuel stabilizer, izintambo, amaphuzu, njll. Lapho ngifaka ama-plugs ayenomnyama, i-flakey, i-gunk kuwo kodwa ngibone okubi kakhulu. Ibhema intuthu emhlophe / eluhlaza okwesibhakabhaka lapho uyiqala, kepha akukho lutho olunolaka. Mina nomfana wami sithole izimbobo ezithile ze-crappie ngaphesheya kwechibi, futhi kuyamangalisa ukubona indlela asabela ngayo lapho ebabuyisela emuva ngokushesha lapho isibungu sishaya amanzi. Kodwa-ke, angifuni ukulahlwa yimizuzu engama-20 ukwethulwa. Ichibi lingamahektare angama-500, kufanele yini kuthathe i-3hp cishe imizuzu eyi-15-20 ukumboza amanzi amaningi kangaka? Lesi yisikebhe sethu sokuqala ngakho-ke angiqiniseki, ngiyazi ukuthi i-3hp incane impela futhi ilungele ukunyathelwa.
Uxolo mayelana nokugembula nje ngethemba ukuthi othile ubona okuthile okubalulekile.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Sat, 08 / 26 / 2017 - 10: 54
Ekuphenduleni Ukusakaza by i-jakeboat
Kungenzeka futhi hhayi ...
Kungenzeka impela futhi akuvamile ukuthi ungadinga ukususa leyo carb uphinde uyihlanze kahle futhi. Inkinga ngezinjini ezindala ezibuyiselwa empilweni ukuthi inhlayiyana encane ethangini likaphethiloli, futhi ukulethwa kukaphethiloli kuvame ukudlidlizela kungavuleki futhi kuvimbe imigudu ye-carburetor. Lokhu kulindeleke. Noma wenze konke okusemandleni ukuhlanza yonke into, akukho okufana nophethiloli odlidlizelayo ukuze kuxegise izinto ngokuhamba kwesikhathi. Bekufanele ngihlanze i-carburetor amahlandla amabili noma amathathu ngaphambi kokuba ngizwe ukuthi imoto ibuyiselwe ngokuphelele. Konke lokhu kuhle futhi kujwayelekile. Uma ufuquza ebangeni eliphakeme, eliphakathi, noma eliphansi, lokhu kungasho ukuthi indlela ephakathi ne-carb ivalekile. Futhi, inaliti yokulungisa, uma usuyilungisile, yiyeke. Ayisetshenziselwa ukumisa imoto. Umisa imoto ngokuhambisa i-lever mpintsha uye endaweni yokuma evala i-valve uvemvane ku-carb. Ngeke udinge ikhithi entsha ye-carb ukuhlanza i-carb okwesibili noma okwesithathu ngenkathi efanayo.
Kuthunyelwe ngu- i-bigrion ku Fri, 10 / 20 / 2017 - 09: 12
Isihlungi se-Fuel Ngaphakathi kwe-tank
Esuse u-oyela wempepho nowegiye esikhundleni sakhe, wakha kabusha isiqalisi sokutholwa kabusha, i-carburetor, nokuthungela futhi wahlanza ithangi ngopende omncane, ku-1966 JW21 yami, futhi yahamba kahle ngethangi eligcwele legesi. Second noma okwesithathu ukukhipha i-trolling, bekungakhwehlela bese kufa. Ngemuva kokuthi ihlale imizuzu embalwa, ibizoqala igijime isikhathi esifushane, bese ikhwehlela bese ifa. Ubuyele erempini ngokulawula okuchizwayo ukuze kuqhubeke kusebenza, okhiqize intuthu eningi. Kuzwakala kujwayelekile?
Kuvula okokuhlunga kukaphethiloli kuyunithi yensimbi eyenziwe ngokhonkolo emise okweqanda ngaphakathi ethangini esitolo. Lapho ithangi ligcwele, isihlungi esanele sasicwiliswa ukuvumela ukugeleza okwanele kukaphethiloli, kepha njengoba izinga likaphethiloli lehla, ukugeleza kukaphethiloli kwakunganele. Angikwazanga ukuthola isihlungi sikaphethiloli ukuze sihlanzeke ukuze siyihlanze. Kungenzeka ngikwazi ukuhlanza endaweni ngokugcwalisa ithangi noma ukubuyisela emuva ukusakaza nge-solvent ethile eyingozi, noma ukuyikhipha ngokusebenzisa ukushisa kanye / noma i-Kroil, kepha ngiphelelwe yisineke futhi ngiyikhiphe bese ngifaka isihlungi esimaphakathi emgqeni ophakathi kwethangi ne-carb . Manje i-JW yami iyasabeka! Ngingathola iGrumman Sport Boat yami iye phansi ngejubane lokunyathela kancane. Isebenza kangcono njalo lapho uphuma.
NGIPHAKAMISA UKWENZA I-R & R YAMANZI OKUPHELA KWAMATAN FUEL FILTER UKUFANELE UKWENZE UHLU LOKUVUSELELWA KWALESI SISEKELO SE-JOHNNYRUDES.
Kuthunyelwe ngu- I-Ram Jet Ku-Sun, 02 / 11 / 2018 - 23: 39
Ekuphenduleni Isihlungi se-Fuel Ngaphakathi kwe-tank by i-bigrion
Ngisanda kuthenga uJohnson 3HP ...
Ngisanda kuthenga iJohnson 3HP futhi isihlungi sikaphethiloli sintered sasingaphezu kokuhlanzwa. Ngazama i-lacquer thinner ngisho ne-Muriatic acid. I-Fuel izohamba kuphela nge-1/2 yokuqala yethangi. Ngikhiphe isihlungi ngasinquma isibonisi sethusi sinterd sokulinganisa ithusi. Ngilinde isihlungi sethangi likaphethiloli i-VW esivela ku-eBay ukuze ngifake iscreen sethusi kokufanele iJohnson. Ungathenga isihlungi sesitayela esisha se-OEM cishe ngama- $ 40.00 kepha bengizokukhokha lokho. Ngihlanze ithangi lami likagesi ngokufaka ama-BBs angama-750 nama-ounces angu-409 we-lacquer thinner. Ngathenga ama-plugs enjoloba esitolo se-harware ukuze ngixhume umgodi wokugcwalisa uphethiloli kanye nomgodi wokuphakelwa kaphethiloli. Ngikhanyise amalambu aphilayo ethangini kabili ngabe sengiwahlanza ngeFomula XNUMX nangamanzi. I-tank ihlanzekile.
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Sun, 11 / 05 / 2017 - 12: 52
I-LighTwin 3 HP Tank Filter
Ngiyathokoza ukuzwa ukuthi uyisebenzisile ne-retrofit yakho. Ngenze ukusesha okuthile. Inombolo yengxenye ye-Evinrude yaleso sihlungi ngu-0594034. Angiyitholanga ku-Amazon, kepha ngithole eminye ebhalwe ku- eBay.
Lapho konke okunye kwehluleka, zama i-eBay. Ngithenga izingxenye eziningi lapho futhi ngihlela ukubhalisela ukubambisana ne-eBay, kufana nokuthi ngiku amazon.com.
Jabulela imoto yakho encane encane.
Kuthunyelwe ngu- Raoul Ku-Mon, 01 / 15 / 2018 - 03: 17
ungaqiniseki ukuthi lokhu kuyi ...
ungaqiniseki ukuthi lena yindawo efanelekile
kodwa ngine-1963 evinrude lightwin enginikezwe iqembu lami lokuhlola
ine-spark enhle kepha iqhubekile ngiyithatha ikhanda futhi ngathola ukuthi ukucindezela kubi kakhulu kudinga ukufaka izindandatho ze-piston mhlawumbe ama-piston bese uphinde uvuse izindonga zamasilinda
i-crank case bearingings ibonakala iphelile futhi
konke lokhu kubangelwa ukupholisa okubi ukuze i-unit engezansi idinga ukwakha kabusha
Ngidinga ukwenza i-teardown ephelele ukufuna noma yimuphi omunye umonakalo kodwa umbuzo wami ukuthi uma kukhona umuntu onokuhlangenwe nakho wokwakha le injini noma uyazi ukuthi kuwufanele yini ukwakhiwa okuphelele
futhi lapho ukuthola khona izingxenye ngibheke yonke i-intanethi ngamapistoni okufaka esikhundleni namasongo kodwa angabatholi noma yikuphi usizo oluzofakwa
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 01 / 22 / 2018 - 14: 38
Ekuphenduleni ungaqiniseki ukuthi lokhu kuyi ... by Raoul
Iyini ukucindezelwa ...
Ukucindezelwa kufundwa kanjani kumhloli wakho? Kufanele kube yi-70-80 psi.
Izingxenye kunzima ukuzithola. Ungahle ube ngcono uma ufuna izingxenye zemoto ku-e-bay. Kwesinye isikhathi banazo ngemali engaphansi kakhulu kunaleyo ongayichitha ezingxenyeni ezithile.
Kuthunyelwe ngu- Raoul Ku-Mon, 02 / 12 / 2018 - 03: 57
Ekuphenduleni Iyini ukucindezelwa ... by ttravis
Anginakho ukucindezela ...
Anginayo i-compress tester kodwa ngisusa ipuleti yokukhipha umshini bese ngiguqula i-flywheel futhi ngizwa ukuxoshwa okuvela kuma-pistons lapho bekhuphuka ukucindezela futhi okungenani i-pistons eyodwa ibonakala ibonakaliswe kancane
manje ihlukanisa i-block ukuze ibuke ngokuningiliziwe izingxenye futhi ingase ibhebhe ibhola ikwazi ukugubha ama-cylinders uma iyakudinga
kodwa angifuni ukuthola ama-pistoni ngoba akulona omusha futhi akusikho isandla esilandelayo engizange ngikhulume ngingazithengwa ngezilinganiso ezifanele
Kuthunyelwe ngu- Raoul Ku-Mon, 02 / 12 / 2018 - 15: 22
Ekuphenduleni Anginakho ukucindezela ... by Raoul
okey ngithatha konke ...
okey ngithatha yonke injini ngaphandle futhi amasilinda anezilinganiso ezilula ekugcineni ngakho manje kufanele ngithole ukuthi ngingakwazi yini ukulungisa lokho noma kufanele ngigcine ngaphezulu
futhi bobabili amaphistoni atholakele esihogweni
futhi ngidinga izingxenye ezimbalwa ezincane ezifana ne-gaskets nezinye izingxenye zamanzi kodwa zibukeka kangcono kakhulu ngakho ngacabanga ukuthi
ngakho manje kubonakala sengathi ngidinga i-piston entsha ye-2 futhi ngibeka isethi ephelele ye-gasket kanye ne-pump pump yamanzi (ngiphule enye yamabhobho ngenxa ye-corosion embi)
kodwa manje im inyunyana nento yokuthi ayikho iminyango ebhodini ibonakala sengathi uhlobo oluthile lokubheka luphonswa ebhodini alubonakali luphelile kodwa
noma yiziphi ezinye izincomo kanye nezixhumanisi zamapistoni amasha azamukelekile kakhulu
Kuthunyelwe ngu- i-ricklummer ku Fri, 02 / 16 / 2018 - 07: 01
I-1963 Evinrude 3hp 3303s marine engine.com isisindo samasondo amakhulu nokuningi
Kuthunyelwe ngu- Raoul Ngo-Wed, 02 / 21 / 2018 - 10: 24
Ekuphenduleni Amacici e-pistons by i-ricklummer
I allready wabheka lokho ...
Ngifunde sonke leso sayithi
Izindandatho ezinamandla kakhulu zisekhona kodwa ama-piston kokubili ayengaphambilini futhi angaphezulu
Ngaphezu kwalokho ngithatha ibhulogi esitolo futhi kubonakala sengathi kufanele zifakwe i-litle
Okwamanje ngilinde ukuthi kuzokwenzani izindleko zokukhiqiza amapistoni amasha futhi kube ne-block eyenziwe uma engekho ngaphezu kokugula kwe-200 ukudonsa umcibisholo kuwo futhi wenze isizathu esiphelele sokwakha ngithande le injini futhi ngithatha ingozi ekuthengeni amabhlokhi wesandla futhi Ama-piston angagcina ebiza kakhulu uma eqala ukubi
uma kukhona umuntu owaziyo indawo engakwazi ukwenza amapistoni okungaba usizofull ngiye ngathintana nezindawo ezimbalwa kodwa bathi kufanele ngithintane nomdayisi kodwa umthengisi kuphela ovotrude ezweni lami akanalo lutho ngami
Kuthunyelwe ngu- Raoul ku Fri, 02 / 23 / 2018 - 02: 59
Ekuphenduleni I allready wabheka lokho ... by Raoul
Ngenza okunye ukumba futhi ...
Ngenza okunye ukumba futhi ngathola ibhulogi nazo zonke izinto ezijikelezayo zihamba kahle esimweni esihle esitolo esinezinto ezithinta ngisho nokufunda ukucindezela okusha futhi ngitshela ukuthi iyinjini enhle futhi bathi igijima ngaphambi kokuba ihlakazeke
i-piston fabricator ibuyele ngokulinganisa kwezindleko ze-250 nje nge-pistons ye-block yakudala enginakho manje nazo zonke ezinye izingxenye zayo zizobeka inani le-350 yilokho okumele kutholakale khona injini uma ngingayithengisa
ngakho ekugcineni i-bummer engingayisebenzisi i-block yangempela kodwa okungenani ngithola ibhodi eshibhile engingayisebenzisa esikebheni sami ehlobo
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ku-Mon, 09 / 10 / 2018 - 13: 45
i-57 evinrude lightwinn inezinye izimpahla ngaphandle kokudlulisela phambili
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 09 / 10 / 2018 - 14: 18
Ekuphenduleni i-lightwinn by umphathi wemikhumbi350
Cha, Ujikeleza konke…
Cha, Ujikeleza yonke imoto uma ufuna ukubuyela emuva. Laba babizwa ngokuthi "ama-dock busters" ngoba akukho hlangothi noma ukubuyela emuva. Ekusetshenzisweni kwangempela, lokhu akuyona inkinga.
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ku-Mon, 09 / 10 / 2018 - 17: 41
Ekuphenduleni Cha, Ujikeleza konke… by ttravis
ngiyabonga ttravis kakhulu kakhulu ...
ngiyabonga ukuthi i-ttravis ipholile kakhulu ngangizilimaza ukuthi kungani imoto ingenza i-360 ephelele
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 NgoThu, 06 / 06 / 2019 - 07: 30
akukho nje uya phambili futhi ...
akukho okuqhubekela phambili futhi uvula i-180 injini ukuthi ibuyele emuva ebizwa ngokuthi ibhasi lokudoba ngatshelwa
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ku-Mon, 09 / 10 / 2018 - 13: 53
Njengokuthi lisho kuphi amanzi baphume evinrude yami 3hp i babone Outboards entsha ukusakaza okuqinile aphume eceleni kodwa lutho okwami ​​kukhona ndima ngemuva kushaft ngentambo esincane amanzi ke kufanele sifane nabo noma ingabe kukhona ndawo lapho kuvela khona umfudlana oqinile wangempela
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 09 / 10 / 2018 - 14: 16
Ekuphenduleni imfucuza by umphathi wemikhumbi350
Kunamancane ambalwa ...
Kunezimbambo ezincane ezimbalwa ezivumela amanzi futhi aqede aphume kuyunithi engezansi. Awekho amanzi amaningi aphumayo. Imayini icishe ilingane nomenzi wekhofi enza ikhofi.
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ku-Mon, 09 / 10 / 2018 - 17: 38
Ekuphenduleni Kunamancane ambalwa ... by ttravis
yilolo hole elimgwaqo ne-stud phakathi nendawo lapho amanzi okumele avele khona
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Mon, 09 / 10 / 2018 - 20: 40
Nginenkinga efanayo ...
Ngibe nenkinga efanayo ngemoto yami ye-3 HP. Bekufanele ngivule zonke izindlela.
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ku-Mon, 09 / 10 / 2018 - 22: 15
Ekuphenduleni Nginenkinga efanayo ... by ttravis
Kulungile ukuthi ngisuse ...
kulungile kufanele ngikhiphe imoto futhi yilapho kulindeleke ukuthi kuphume khona amanzi futhi ususe ikhanda nje
Kuthunyelwe ngu- dlofthouse NgoThu, 08 / 01 / 2019 - 14: 38
Amanzi aphuma kanjani ohlelweni?
Ngifunde kule ntambo ukuthi inani lamanzi eliphuma ku-Exhaust Relief kufanele licishe lifane nomenzi wekhofi we-drip. Ngingasho ukuthi okwami ​​kwenza ngalokho. Noma kunjalo, nginovalo ngakho, ikhanda lifudumele ngokwanele ngemuva kokuhlolwa kwemizuzu embalwa engingafuni ukugcina isandla sami sikuso. Imicabango?
I-PS - Lokhu engikuthumele okokuqala kuleli sayithi eliwusizo kakhulu. Siyabonga wonke umuntu.
Kuthunyelwe ngu- ttravis ku Fri, 08 / 02 / 2019 - 13: 57
Ekuphenduleni Amanzi aphuma kanjani ohlelweni? by dlofthouse
Ngidinga inombolo yemodeli ngakho ngi…
Ngidinga inombolo yemodeli ukuze ngikwazi ukuphendula kangcono umbuzo wakho. Amanye ama-motors ane-thermostat engashintshwa; abanye abakwenzi.
Kuthunyelwe ngu- dlofthouse Ngo-Tue, 08 / 06 / 2019 - 16: 31
Ekuphenduleni Ngidinga inombolo yemodeli ngakho ngi… by ttravis
Kuthunyelwe ngu- ttravis NgoThu, 08 / 08 / 2019 - 01: 40
Ayikho i-thermostat ku-…
Ayikho i-thermostat kuleyo motor. Inani lamanzi libonakala lilungile. Uma ungakwazi ukubamba isandla sakho ekhanda lamandla, ungahle ube nokuvinjelwa okuthile. Ungahle ucabangele ukususa ikhanda lesilinda ukuze ubone ukuthi libukeka kanjani futhi mhlawumbe ulihlanze. Uma uyifaka esikhundleni, qiniseka ukusebenzisa i-head gasket entsha .... Tom
18-3841 Sierra Shona Gasket
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ngo-Tue, 09 / 11 / 2018 - 08: 07
Ngingasebenzisa umenzi we-rtv gasket ...
Ngingasebenzisa i-rtv gasket maker for a gasket esitokisini yesikhashana kanye nomhlaba wokulinganisa we-motor kuya engxenyeni ephansi
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Tue, 09 / 11 / 2018 - 11: 13
Ekuphenduleni Ngingasebenzisa umenzi we-rtv gasket ... by umphathi wemikhumbi350
Ngingancoma ukuthola i ...
Ngingancoma ukuthola i-gasket yekhanda efanele. I-RTV kungenzeka ingabi namandla ngokwanele ukumelana nengcindezi nokushisa, futhi ingangena kumajakethi amanzi bese idala inkinga. Angazi ukuthi ukutholakala kuphi, kepha kimi, ama-head gaskets awabizi. Ngiyazi ukuthi abanye abantu emhlabeni bakuthola kunzima ukuthola izingxenye futhi kufanele benze ngcono okuningi.
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ngo-Tue, 09 / 11 / 2018 - 13: 12
mayelana nokuhlanza amavesi amanzi
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Tue, 09 / 11 / 2018 - 13: 26
Ngisuse ikhanda lamandla futhi ...
Ngisuse ikhanda lamandla futhi ngathola umkhondo wamanzi ophelele kusuka kokufakwayo kwepherishi kuya lapho ilahla khona ngomphunga osendaweni ephansi. Bengisebenzisa ipayipi lomoya nezintambo eziningana ezinhle nezinsimbi zokubhola ukuze kukhishwe yonke into. Ngikholwa ukuthi ngibhale ngalokhu kumaphrojekthi wami we-3.0 noma we-5.5. Enye yayo ibingaboni, ngakho-ke ngisebenzise ipayipi lomoya ukushaya umoya ngibone ukuthi liphuma kuphi. Kuthathe isikhashana. Imigwaqo eminingi incane futhi ivalekile kalula, ibulala izinjini eziningi.
Kuthunyelwe ngu- umphathi wemikhumbi350 Ngo-Tue, 09 / 11 / 2018 - 21: 35
hey guys inkinga entsha lol ...
Sawubona bafana inkinga entsha lol uthathe ikhanda wahlanza wonke amapaseji amanzi aklinywe kakhulu kepha ngemuva kokufaka ikhanda (usebenzisa i-gasket yoqobo) futhi manje imoto ngeke iqale manje qaphela ukuthi yaphaphama impilo imizuzwana embalwa ngemuva kokufaka i-carb hlanza ekamelweni lomlilo kodwa ngemuva kwalokho akukho lutho .... nicabangani
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ngo-Tue, 09 / 11 / 2018 - 21: 57
Ekuphenduleni hey guys inkinga entsha lol ... by umphathi wemikhumbi350
Inaliti yokuntanta inamathele? Wena…
Inaliti yokuntanta inamathele? Cishe ubenekhanda lamandla elibheke phansi elibambe inaliti lidlula endaweni ejwayelekile.
Kuthunyelwe ngu- ejfellman Ngo-Sat, 09 / 15 / 2018 - 17: 39
Emilawulweni yakho ye-tune up ...
Emilawulweni yakho ye-3hp Lightwin (okuyiyona enhle, btw) yilokho obiza nge-cylinder 1 nge-cylinder engenhla noma ephansi?
Kuthunyelwe ngu- ttravis Ku-Sun, 09 / 16 / 2018 - 19: 43
I-Cylinder i-1 ingaphezulu ...
I-Cylinder i-1 yi-cylinder engenhla.
Kuthunyelwe ngu- I-Dipstick Ngo-Tue, 09 / 25 / 2018 - 16: 03
ngisanda kulungisa iminyaka yokuqala yama-50's Johnson; carb, ukuthungela, impeller, imisebenzi. Inenhlansi enhle kepha igcwala ngokushesha, ize ifike eqophelweni lapho igesi iconsela khona kusixhumi se-carburetor / air silencer. Ngenkathi ngakha kabusha i-carb, ngilahlekelwe ngumthombo omncane ophethe inaliti ye-float iye kwi-float. Njengoba ezinye zalezi carburetors zingenayo intwasahlobo, ngiyibuyisela ndawonye ngaphandle kwayo. Kwagcwala amanzi. Ngakho-ke, ngithathe isitsha sokuntanta ngasifaka isiphethu engisitholile phakathi kwezingxenye zami ezindala (ngine-3 hp Evinrude / Johnson's). Kusagcwele izikhukhula.
Ngihlehlise inaliti yejubane elikhulu 1 & 1/2 ukujika kanye nenaliti yejubane eliphansi 3/4 ukujika.